Geedo waaweyn oo loogu talagalay dayrta iyo qaboobaha jiilaalka | Bogagga rinjiga bilaash ah ee loogu talagalay
Tikidhada waaweyn ee xilliga dayrta iyo qaboobaha
Goobaha jiilaalka ee guriga lagu sameeyo oo la mariyo waraaqaha derbiga
Cirifka dabaylaha ka yimaada Thousand iyo One Night
Fududyada guriga lagu sameeyo ay soo jiidashada gaar ah u gaar ah. Xilliga xagaaga, waxay shimmer in deriskiisa yare on Terrace, ee dayrta iyo jiilaalka, waxay ku qurxin our guriga ama miiska martiqaadka ah, xitaa haddii ay jirto dabayl lahayn.
Duufaanta xilliga dayrta sida quruxda
Dabcan, arag fangaska guriga lagu sameeyo xilliga dayrta iyo jiilaalka sida quruxda albaabka, tusaale ahaan, albaabka, weyn. Qaybta ugu fiican waa in ay fududahay, mid Si aad u naqshid nalalka naftaadasidaa daraadeed xitaa carruurtu waxay ku raaxeysan karaan oo ay ku gaari karaan natiijo cajiib ah iyada oo aan aqoon hore u lahayn. Haddii aysan taasi ahayn ...
Windlichter si fudud ayaad naftaada u dhajineysaa
Fududyada guriga lagu sameeyo ee dayrta
Mid ahaan iftiinka dabaysha ee guriga lagu sameeyo dayrta Markaad haysato dhalada ku habboon shumaca. Haddii ay tahay foosto weyn, waxaad isticmaali kartaa dhalooyinka lagu ilaaliyo. Dabcan, waxay sidoo kale heli karaan qaabab kala duwan. Xitaa xabbad jilicsan ayaa si fiican u adeegi karta.
Had iyo jeer waxay u muuqataa mid wanaagsan haddii aadan ahayn mid kaliya faan-guriga-guriga loo isticmaalo qurxinta, laakiin ugu yaraan saddex nooc oo isku mid ah miiska ama daaqadda daaqadda.
Sida shumacadu waa mowjado ama - iyadoo ku xiran cabbirka muraayadda - shumacyada xitaa shooga yar.
Wixii muraayadda dayrta waxaad u baahan tahay caleemaha midabka leh ee maple & co. Kuwani waa in la qalajiyaa dhawr maalmood ka hor. Kadibna waxaad ku xiri kartaa adigoo ku dhejinaya quraarad fudud oo ku wareegsan galaaska. Laakiin iska ilaali: Fadlan hubso in caleemaha qallalan aysan la xiriiri karin ololka shumaca.
Sidan oo kale dabcan waxaad dabiici kartaa xilli kasta oo kale oo ku yaal galaaska. Xiddigaha kartoonada leh ee xilliga qaboobaha, caleemaha la qalajiyey iyo geedo yaryar guga iyo xagaaga. Waxyaabaha wanaagsani waa in sida a faan-guriga-guriga ku dhowaad kharashka ku baxa!
Dabcan waxaad sidoo kale u baahan tahay shamac iyo dhalo taas. Intaas waxaa sii dheer, waxaad kaloo u baahan tahay waraaqaha derbiga iyo waraaqda raadinta. Wanaagsan ee tapetenkleistermethode eeg xitaa galaas yar, kaas oo aad markaas daadisay kooxo yaryar, tusaale ahaan, on a Christmas tray.
Laga soo bilaabo warqadda raadinta ee Qalabaynta guriga Moodooyinka jiilaalka sida ubaxyada, xayawaanka ama geedaha qoryaha la jaray. Kuwaas ayaa markaa si gooni ah iskugu xirxiray ama aad iskugu xirxirtay (qurux, haddii aad gooyay xiddigaha kaliya ama dhaxan, tusaale ahaan) waraaqda derbiga ee sanduuqa.
Xitaa caruurta aad u yar ayaa si fudud u jeexjeexi kara warqadaha ama warqadaha. Waxaa laga yaabaa in la sameeyo midab ku habboon Christmas-ka. Oo hadday noqoto inuu midabo badan leeyahay, waa wax aan caadi ahayn oo keliya iftiinka dabaysha!
Haddii aadan rabin inaad sir ka dhigtid dhaladaada, waxaad sidoo kale ka shaqeyn kartaa waraaqaha xayawaanka. Si kastaba ha noqotee, taasi waa mid aad u adag oo leh caruurta yar yar. Halkan waxaad u baahan tahay baalal beerka, warqadaha midabada leh, waraaqaha midabaynta iyo dhagxaanta. Sidoo kale, dabcan, maqaarka, xabagta iyo dheelitirka.
Cunidda xilliga dayrta - tufaax la dubay iyo muffin bocorka ah
Midabaynta dayrta bogga
Midabaynta bogagga xilliga dayrta
Eeyooyinka xilliga jiilaalka Xayawaanka
Midabaynta bogga dagaalka tartanka barafka jiilaalka
Sameynta bogga xilliga qaboobaha
Nadiifi naftaada Tinker leh carruurta
Samee bacaha dufan leh carruurta